သရဲသကြားလုံး | Kaungphyo's Weblog
“ မေမေ၊ သားဘာဝယ်ပေးရဦးမလဲ … ခိုင်းလေ ”
နွေရာသီကျောင်းပိတ် ကလေးတွေအိမ်ရှိတုန်း လက်တိုလက်တောင်း ဟိုဒီခိုင်းမိပါတယ်။ အပေါက်အစပ်မတည့်ချင် ဘူး။ သင်းတို့ ကစားလက်စရပ်ပြီး မသွားချင်လှသမို့ ‘ကိုကိုကြီး ခိုင်းလိုက်၊ ညီလေး ခိုင်းလိုက်’နဲ့ လွှဲချပေကပ်နေကြ တာ။ ခုတော့ တစ်ရာလောက်ဈေးပြုတ်ကျနေတဲ့ကြက်ဥ ထက်ခြမ်းခွဲ လေးယောက်တစ်နပ်စာ စီမံခန့်ခွဲနေရတဲ့အရေး ‘ဘာဝယ်ပေးရဦးမလဲ၊ ဘာခိုင်းဦးမလဲ’ တသွတ်သွတ်လာမေးနေကြလေတော့ ထုဆစ်ခေါက်ခက်ပစ်လိုက်ချင်စိတ် ကယ်နဲ့ လက်ဆစ်တွေကိုယားလာတယ်။
“ မေမေ့ … ”
“ သား … ဘာကူလုပ်ပေးရမလဲ ”
“ အမလေး၊ ရပါတယ်ရှင်၊ လွတ်လွတ်လပ်လပ်သာ နေကြပါ။ ဟင်းတစ်ခွက်ပဲ ပြီးပြီ”
“ သားက မေမေ့ ကူလုပ်တယ်နော်။ ခိုင်းစရာရှိ သားခိုင်း။ ကိုကြီး မခိုင်းနဲ့ ”
အလို အငယ်လူ ရွှေမျက်မှန်ရဲ့စကား။ တယ်သဘောကောင်းနေကြပါလား။ စိတ်ထဲ သရိုးသရီဖြစ်မိတာ အရင်တစ်ပတ် အိမ်ရှေ့ခန်းဘောလုံးကန်ကြတယ်။ ပြောဆိုမရဘူး။ အိမ်တွင်းအုန်း ဘောလုံးမှန်ပြီး ပြုတ်ကျသွားတယ်။ စိတ်တိုလိုက် တာ မပြောနဲ့တော့။ ဖခင်ကြီးကို တောင်းပန်လိုက်ရတာလဲ တစ်မနက်ခင်းကုန်လို့။ ဒီနောက်ပိုင်း ကလေးတွေ ‘ဘာခိုင်း မလဲ၊ ဘာဝယ်ရမလဲ’ နဲ့ အပြင်ထွက်ဖို့ချည်း ပြောဆိုနေကြတယ်။ အိမ်တွင်းဖခင်ကြီး အလိုမကျ ဖြစ်တော်မူသလား မသိ။ လက်ဖက်တစ်ရိုးအမြန်ဆက်သ။ သူငယ်နှပ်တွဲ အမိုက်မဲလေးတွေကိုယ်တိုင် တောင်းပန်ခိုင်းပါ့မယ်။ ခွင့်လွှတ် တော်မူပါ။ ပြီး … တစ်ဆက်တည်း ခြေမငြိမ်အိမ်မကပ်တဲ့ အိမ်ကလူကြီးကိုလည်း အိမ်ကပ်အောင် မစတော်မူပါ။ အင်း … အဲအဲ။ တစ်ပတ်ငါးရက် အိပ်မက်လှလှ ပေးတော်မူပါ။
တစ်ဒုံးဒုံးတစ်ဒိုင်းဒိုင်း ဂန္ထ၀င်ငရုပ်ဆုံတေးသွားမှာ၊ ရက်ပ်ဂီတဆန်ဆန် ပြတ်တောင်းတောင်းလျှပ်စစ်မီးကြောင့် မီးသွေးခဲလေးတွေလည်း ပို့စ်မော်ဒန်ဖြစ်လာပြန်တယ် အိမ်ကလူကြီးရဲ့။ တော့်မလဲ တစ်နေကုန်အပြင်ထွက်နေတာ ချည်းပဲ။ ကလေးတွေ ကျောင်းပိတ်ရက်အိမ်မှာရှိတုန်း သွန်သင်ဆုံးမဖော်မရဘူး။ တကတည်း ဒီနေ့လည်း ဘယ်ထွက် ဦးမလဲ မသိဘူး။ ဘာလုပ်တယ် ညာလုပ်မယ်နဲ့ တမင်လမ်းရှာနေတာကို မသိချင်ယောင်ဆောင်နေ အဟုတ်မှတ် တယ်။
မဖြစ်ဘူး၊ ကျုပ်ဈေးသွားမယ် …ကလေးတွေကြည့်ထားဆိုပြီး ဦးအောင်ထွက်မှ။ ဒီမှာ တော့်သားတွေ သကြား လုံး တပြွတ်ပြွတ်စားနေကြလို့ တအော်တည်းအော်နေရတယ်။ ကြည့်ကျက်ပြောဦးဆိုတော့ … ‘နင်ဈေးသွားမှာ မဟုတ် လား။ သွားတော့။ နားပူတယ်’ တဲ့။ ဟွန်း …. အချိုးတွေ။ အချိုးတွေ …အိမ်မှာဆို ဒီအတိုင်း။ သူ့ဟာမတွေနဲ့ကျ ဖြီးဖြဲ လို့။ ဆောင့်ဆောင့်အောင့်အောင့်နဲ့ ဈေးခြင်းတောင်းဆွဲပြီး အရိုးကုန်းဈေးဘက် ထွက်ခဲ့တယ်။
“ အစ်မကြီး၊ အကြွေတစ်ရာမရှိလို့ ငရုပ်သီးစိမ်းလေး ထည့်ပေးလိုက်မယ်နော် ”
“ အေးအေး၊ ရပါတယ် ညီမရယ် ”
“ အန်တီ၊ အကြွေငါးဆယ် ပေးပါလားဟင် ”
“ မရှိဘူးဟဲ့။ ဒါဆို ပင်စိမ်းလေး ထည့်ပေးလိုက်”
“ ကျေးဇူးပါ ….အန်တီရယ် ”
သိပြီလား၊ ဈေးသွားရတာ လွယ်ဆိုလိုက်ခဲ့။ အပေါင်းအနှုတ်၊ အက္ခရာသင်္ချာနဲ့တင် မရဘူး။ အညှိအနှိုင်းလေး ပါမှ။ ငရုပ်သီးစိမ်းလေး အမ်းလိုက်၊ နံနံပင်လေး အပိုထည့်လိုက်၊ အရိအရွဲလေး ဟိုခုတ်ဒီထစ် အဆစ်ထည့်ခိုင်းလိုက် အိမ်မှာဘာလိုသလဲ စဉ်းစားရသေးတယ်။
“ ဒီမှာ။ ဒါဘာလဲ ပြောစမ်း ”
ယောက်ျားအင်္ကျီအိပ်ကပ်ထဲကတွေတဲ့ အသည်းပုံထိုင်းသကြားလုံး မွှေးမွှေးလေးတွေ။ လက်ဖျံရိုးအားစိုက်ပြီး သကြားလုံးကို ကျစ်ကျစ်ပါအောင်ဆုပ်ထားရင်း ထန်ထန်ဆတ်ဆတ် အော်မေးပစ်လိုက်တယ်။ တော့်ဟာမနဲ့ အကြည် ဆိုက် အလေလိုက်လာတယ် မဟုတ်လား။
“ရမ်းသမ်းပြောနေတာပဲကွာ။ အကြွေအမ်းလိုက်တာကွ။ နားမလည်ဘူးလား”
သူပြောနေတာတွေက ကလေးဘီစကစ်ဝယ်တုန်းက တစ်ခါ။ ခေါက်ဆွဲခြောက်ဝယ်တုန်းက တစ်ခါ။ ဆီဝယ် တုန်းက တစ်ခါ။ သင်း … ဒီလိုအလွယ်ပြောပေမယ့် လွယ်လွယ်နဲ့ ယုံပစ်လိုက်လို့ မရသေးဘူး။
“ ဦးဦးလှိုင်မျိုးဦး ….ဆီ အစိတ်သားပေးပါ ”
“ အကြွေထည့်ပေးနော် သား ”
“ မပါဘူး ….ဦးဦးရဲ့ ”
“ ဒါဆို သကြားလုံး အမ်းလိုက်မယ်နော် ”
“ ရပါတယ် ဦးဦးရဲ့ ၊ ပီကေချွန်လေးတွေ ပေးလိုက် ”
“ အန်တီဝါ၊ လက်ရေးလှ စာအုပ်တစ်အုပ် ”
“ သား အကြွေငါးဆယ်တော့ ပေးရမယ်နော် ”
“ အန်တီရေ …. ပိုတာတွေ သကြားလုံးပေးလိုက်လေ ”
ဒီတော့မှ သဘောပေါက်တယ်။ သားနှစ်ယောက် ဈေးဝယ်ထွက်ချင်တာ ဒါကြောင့်ကိုး။ အခုတော့ သကြား လုံး တွေ့တိုင်း ကလေးစိတ်မချရ။ ကလေးအဖေ စိတ်မချရနဲ့။ ပူစပ်ပူလောင် နေ့ကြောင်တောင် သရဲခြောက်ခံနေရ သ လိုလို။
“ အစ်မကြီး အကြွေပေးပါ ”
“ မပါဘူး … ”
“ ဒါဆို သကြားလုံး ယူသွားလိုက်နော် ”
“ မယူဘူး။ အမ်းလဲမအမ်းနဲ့။ ရှင်တို့ဆိုင်လဲ နောက်တစ်ခါ ဈေးမ၀ယ်တော့ဘူး ”
ဒါပဲ။ ခတ်ပြတ်ပြတ်ပဲ။ ဘယ့်နှယ့်တော် သကြားလုံးထုတ်တဲ့သူတွေများ အကြွေအမ်းဖို့ အဆင်သင့်ဖြစ်အောင် ကြံစည်ထားသလားမသိ။ ငါးကျပ်တန်၊ တစ်ဆယ်တန်၊ ကပ်သီးကပ်သပ် ဆယ့်ငါးကျပ်တန်။ နှစ်ဆယ့်ငါးကျပ်တန်က အစ ရှိတယ်။
“ မေ ..မေ့ ”
နက်ခ်ဝါ့ခ်ဂိမ်း သွားဆော့ချင်လို့ မျက်နှာလိုမျက်နှာရ လာလုပ်နေတဲ့ သားနှစ်ကောင် အတောလေးခင်းလာပြီ။ ဘာများပါလိမ့်။
“ ဟောဒီ့မှာ၊ ဖေဖေ့အိပ်ထဲက တစ်ရှူးမွှေးမွှေးလေးတွေ တွေ့တယ် ”
တွေ့ပလေ။ သင်း … သကြားလုံးကနေ တစ်ရှူးပြောင်းသွားပြန်ပြီ။ အတော်ဟုတ်နေတယ်။ အရှက်တရားကို မရှိဘူး။ ပြောလိုက်ရင် အကြွေအမ်းသလေး ဘာလေး။ ဆေးလိပ်ကြိုက်တာပါ။ ဒူးဝါ၊ ဗီးဂက်စ်၊ ရူဘီ အအမ်းယူပါလား။ သလောက် အိမ်ခေါင်ကြပ်စွဲအောင် ဆေးလိပ်ဖွာနေတဲ့သူက ဘာလို့ သကြားလုံးယူလိုက်၊ တစ်ရှူးယူလိုက် ဖြစ်နေရ တာလဲ။ လာပလေ့စေ တွေ့မယ်။ အိမ်ပေါက်ဝက ထိုင်စောင့်နေလိုက်တယ်။
ယောင်ပေယောင်ပေ ခြေတံရှည်ဦးမယ့် သားတွေကိုတော့ –
“ ရော့ဒီမှာ ….၊ ဒီအချိန် စက်မောင်းရလို့ တစ်နာရီ ငါးရာတော့ယူမှာ။ ဒါ ဈေးအမ်းတာတွ စုထားတာလို့ ပြော လိုက် ”
သကြားလုံးတစ်ဆုပ်ကြီး ကြွပ်ကြွပ်အိတ်နဲ့စုထုတ်ပြီး ကိုကြီးပိန်တို့ညီအစ်ကိုနှစ်ယောက်လက်ထဲ ဆောင့် အောင့် ထည့်ပေးလိုက်တယ်။
This entry was posted on September 17, 2009 at 5:05 pm and is filed under အနုပညာ.You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed.You can leavearesponse, or trackback from your own site.
Previous: ရော်နယ်လ်သာစိန် (ခေတ္တ-စပိန်)
Next: ဒါပေမယ့် …… မေမေရယ်